သတ္တုဖြတ်ဖို့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲ။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / သတ္တုဖြတ်ဖို့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲ။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-12-19 မူလ:ဆိုက်ကို
သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်ပုံစံ, ရှုထောင်တိကျမှုနှင့်မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကိုရရှိရန်အတွက်အလုပ်ခွင်မှပိုလျှံသောပစ္စည်းများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။diy tool ကိုပါဝင်ပါသည် တူးရန်စက်,ပိုလန်စက် grind, အိတ်ဆောင်သတ္တုကြိတ်စက်စသည်တို့ကိုစသည်တို့
1. အမျိုးအစားများနှင့်C၏ hindacarian များMetalCအသုံးအနှုန်းMပြည်
arc arc ကိုထစက် (wire ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်) သည်ပျမ်းမျှစက်ပစ္စည်းဟောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်မြင့်မားသောစက်တိကျမှု၏အားသာချက်များရှိသည်tသူအထူကိုဖြတ်တောက်ဖြစ်ခြင်းနီးပါးအကန့်အသတ်မရှိ,သို့သော်၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျပြီးရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၏လိုအပ်ချက်များအတွက်မသင့်တော်ပါ(ဒါဟာဖောက်ထားရန်လိုအပ်သည်) ။
ပလာစမာဖြတ်တောက်ခြင်းသည်စက်ကိရိယာများကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်အနိမ့်ဆုံးနှင့်မြင့်မားသောဖြတ်တောက်ခြင်းထိရောက်မှုရှိသည်စာချုပ်ထူသောသတ္တုပြားများ၏ဖြတ်တောက်မှုအတွက် ed ။ ဖြတ်တောက်ခြင်းနိမ့်ကျခြင်းနှင့်ကြီးမားသောဖြတ်တောက်ခြင်းချုပ်ရိုးများကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုသည်မြန်နှုန်းမြင့်ပြီးမြင့်မားသောဖြတ်တောက်ခြင်းလိုအပ်ချက်များအတွက်မသင့်တော်ပါ။
လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းသည်အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။Aကျေနပ်ဖြေရှင်းချက်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်fouကြိမ်မြောက်fမီလီမီတာအထူပန်းကန်များရှိ micron အဆင့်၏ Ultra - ပါးလွှာသောပန်းကန်။ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဖြတ်တောက်ခြင်းအရည်အသွေးနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြင့်မားသည်။ Fiber Laser လျှင်စာချုပ်ed, pet ပစ္စည်းများသောအခါ operating ကုန်ကျစရိတ်အလွန်နိမ့်သည်ဖြစ်ဖြတ်။
သတ္တုရိုင်းစိုင်းသောမြင်ကွင်းသည်သံမဏိကိုဖြတ်တောက်ရန် Sawtooth ကိရိယာဖြစ်သည်။ သံမဏိကိုအလွယ်တကူဖြတ်နိုင်သည်။Tသူသည်မြင်ကွင်းသည်ထူးခြားသောပစ္စည်းနှင့်သွားပုံသဏ္ card ာန်ကိုမွေးစားသည်။ အခြားကိရိယာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။it ကိုသတ္တုကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာဖြတ်နိုင်ပြီးပိုမိုအားကောင်းသည့် chart spaction စွမ်းရည်ရှိပြီးဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်အပူကိုလွှဲပြောင်းခြင်းမရှိပါ။ ခက်ခဲသောသတ္တုရိုင်းများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၏ခေါင်းကိုဖြတ်တောက်ခြင်း ဦး ခေါင်းကို tungsten carbide နှင့် carbide တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ နှင့် ဖြတ်တောက်ရန် workpiece သို့ပြောင်းရွှေ့သောအပူ minimize ဖြစ်ပါတယ်,ထို့ကြောင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်စောင့်ဆိုင်းအချိန်ပြန်လည်ဖြစ်သည်Duced.
လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်Mompelfunctional လျှပ်စစ်ကြိတ်သမားဟုလည်းခေါ်သည်သို့မဟုတ်ကလောင်ထွင်းထု။Grople လျှပ်စစ်သမားရိုးကျအမျိုးအစား, သေးငယ်တဲ့အမျိုးအစားနှင့် micro အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်ပါတယ်aအသံအတိုးအကျယ်ကို ccording ။ အဆိုအရလိုအပ်ချက်၏လေှျာက်လွှာတူးရန်အပြင်တွင်းတွင်း ingဆက်စပ်ပစ္စည်းများ,kit ခေါင်း၏စိတ်ကြိုက် grinders2mm အချင်းရိုးတံနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အနေဖြင့်ခေါင်းကိုဖြတ်ခြင်း,သေးငယ်တဲ့ကြိတ်တံ.
၏ဖြတ်တောက်ဓါး၏အချင်းကြိတ်စက်များကိုဖြတ်တောက်ခြင်း25 မီလီမီတာခန့်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အလေးသာသောအချင်းများကြောင့်ဖြတ်တောက်မှုပြုလုပ်ရန်အလိုတော်မှာဖြတ်တောက်ခြင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ပါးစပ်ပုံစံနှင့်အတူ နှင့်ဖြတ်၏အကျယ်ပါးစပ်1 မီလီမီတာထက်မပိုပါ။ ဘယ်အချိန်မှာသံဖြတ်, ဖြတ်ဖြတ်ပါးစပ်မပူဘူးPower tool ကိုကြိတ်နှင့်cအပိုင်းပိုင်း utting ၏ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများ ထိုကဲ့သို့သောသံကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများဖြတ်နိုင်ပါတယ်သံပြားအလူမီနီယမ်သံပြား, အလွိုင်းသံပြား, သစ်သားသံပြားပလပ်စတစ်သံပြားနောက် ... ပြီးတော့။
သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစက်ကိရိယာများ, စက်များသို့မဟုတ်လက်ချင်းစီချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ သူတို့၏ပုံစံများသည်ကွဲပြားခြားနားပြီးမတူညီကြသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးသည်တူညီသောဖြစ်ရပ်များနှင့်ဥပဒေများရှိသည်။
diy tool ကို တူးရန်စက် ပိုလန်စက် grind အိတ်ဆောင်သတ္တုကြိတ်စက် လျှပ်စစ်ကြိတ်စက် လျှပ်စစ် grinder စိတ်ကြိုက် grinders သေးငယ်တဲ့ကြိတ်တံ ကြိတ်စက်များကိုဖြတ်တောက်ခြင်း Power tool ကိုကြိတ်